Ma Maqashay in Mesut Ozil uu Xiisad adag ka dhex abuuray kooxda AC Milan!!……(Sidee wax u jiraan???) – Gool FM
Byare January 19, 2019
(London) 19 Dis 2019. Mesut Ozil oo boos joogta ah weli ka heli la’ macalinka cusub ee Arsenal Emery ayaa Xiisad adag ka dhex abuuray maamulka ugu sarreeya ee kooxda AC Milan kaddib markii ay isku qabsadeen waa la keenayaa iyo lama keenayo.
Madaxii fulinta Arsenal ee iminka ka howl galay kooxda reer Talyaani Ivan Gazidis iyo rugcadaaga Milan Paolo Maldini oo dhawaan kooxda laga shaqo galiyay ayaa isku qabsaday waa la keenayaa kubbad qaabeeyaha reer Germany iyo lama keenayo.
Sida uu warinayo warsidaha caanka ah ee Corriere dello Sport, inuu sii xumaaday xiriirka Gazidis iyo Maldini sababo la xiriira fikirkooda kala duwan ee ku aadan Ozil.
Gazidis, kaa oo 10-sano soo ahaa Madaxa fulinta Arsenal isla markaana xil kaa la mid ah Milan ka qabtay 2017 ayaa ka soo horjeeda fikirka in Ozil la keeno Serie A.
Wuxuu aaminsan yahay in 30-jirka uusan ku habooneyn istraatiijiyada shaqo galinta kooxda, sababo la xiriirta da’diisa oo wayn iyo waliba mushaarkiisa qaaliga ah taa oo dhaqaalo ahaan kooxda ka dhigeysa xasilooni daro.
Maldini, oo Todobo Serie A iyo shan jeer oo Europe League kula guuleystay Milan ayaa isna noqday Agaasimaha hormarinta ciyaaraha kooxda wuxuuna qabaa fikirka ah in laga faa’iideysto fursada lagula soo saxiixan karo laacib jooga heerka Ozil oo kale.
Ozil ayay u badan tahay inuu ka soo tagi doono gegada Emirates maadaama uusan marna ku heysan tababare Emery.
Goolkii Firmino oo Baal Dahabi ah u galay Liverpool.....(Muxuu uga dhigan yahay???)